E-News Nepali || Fast and Accuracy » २० वर्ष कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो २० महिनामै प्रचण्ड धुलोपिठो हुनुभो
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले न्यायको पक्षमा लड्ने मान्छे कहिल्यै न’मर्ने बताएका छन्। कपिलवस्तुको शिवगढी गाउँपालिकामा साेमबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने,अर्काको दास बनेर अन्याय अत्याचारले म’र्नु भन्दा ल’डेर म’र्नु धेरै ठूलो कुरा हो।
न्यायको लागि सं’घर्ष गर्न ड’राउन नहुने उनले तर्क गरे। प्रचण्ड कमरेडसँग छुटेर आउँदा मलाई साथीहरुले दाई ल’डा’ईँ भयो भने मान्छे म’र्छ भन्नुहुन्थ्यो,उनले भने,मान्छे जो कोही पनि म’र्छ।
तर,अन्यायमा परेर म’र्नु भन्दा न्याय बुलन्द गरेर नै म’र्नुपर्छ। न्यायको कुरा गर्ने मान्छे कहिल्यै म’र्दैन। पार्टीलाई प्रतिबन्ध गरेपछि घरघरमा पुगेर हामीलाई द’मन गर्यो। अन्यायले सिमा नाघेपछि मृत्यु पनि प्रिय हुन्छ। सत्य बुझेपछि ड’र भाग्छ।
ज’नयुद्धमा अ’त्या’चारमा परेका व्यक्तिहरुको वि’रु’द्ध सरकार लागेको उनले दा’बी गरे। सत्यको वि’रुद्ध बोल्दा सरकारले प्रतिबन्ध गरेर आफ्ना मान्छेलाई गो’ली हा’नी मा’रेको उनले बताए। हामी यहाँ बाल बाल बाँचेका मान्छौँ। यो राज्य हामीलाई धेरै दिन टिक्दैन भनेर हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ। सत्ताको बुद्धि कस्तो हुन्छ ‘कु’ बाटा हिँड्ने मान्छे कति ग’ल’त सोच्छ कांग्रेसको घरमा पनि गो’ली राखेको हुनसक्छ भनेर खोज्यो’उनले भने।
उनले आफूहरुलाई प्रतिबन्ध गरेर सरकारले अन्याय गरेका बताए। ‘हामीलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा सत्य थियो? हाम्रो पार्टीको कार्यकर्तालाई समातेर गो’ली हान्ने कुरा सत्य थियो? हाम्रो पार्टीका नेतालाई समातेर गो’ली हानेर मा’र्नु के सत्य थियो?’ उनले भने। प्रचण्ड र बाबुरामले गलत बाटो चालेको उनले आ’रोप लगाए। सहिद र बे’पत्ता परिवारको अझै न्याय नपाएको उनकाे भनाई छ। ‘प्रचण्डले हाम्रो एक जना कमरेडलाई बोलाएर भन्नुभएछ, २० बर्ष मलाई कसैले हल्लाउन सक्दैनन् भन्नुभएछ। तर,हामीले छाडेको २० महिना नहुँदै धुलोपिठो भइसक्नुभयो’ उनले भने।
प्रकाशित मिति २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १४:३८